Amandla e-ALT kunye ne-TAB | Martech Zone
Lwesine, Matshi 25, 2010 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 URobby Slaughter
Xa kuziwa kubuchwephesha bekhompyuter, ndiyamangaliswa ukuba bangaphi abantu abangaqhelananga namaqhosha amabini abaluleke kakhulu kwikhibhodi yakho. Amandla amangalisayo e-ALT kunye ne-TAB aquka ezinye zeengcebiso zemveliso ezibaluleke kakhulu kuye nakubani na osebenzisa ikhompyuter ukukhuthaza okanye ukuqhuba ishishini labo. Ngamanye amagama: phantse wonke umntu ngoku ufunda iMartech!
Ukuqonda ngokwenene indibaniselwano ye-ALT + TAB, kufuneka siqale ngengxoxo yesitshixo se-ALT. Mhlawumbi uyazi ukuba “i-ALT” imfutshane xa isithi “enye into.” Oko kuthetha ukuba eli qhosha lincinci lenzelwe ukutshintsha wonke umsebenzi wojongano lomsebenzisi wangoku. Iwizard zeekhompyuter ngamanye amaxesha zibiza oku "kukutshintsha kwemowudi." Ukucofa iqhosha elithi "ALT" uxelela umatshini ukuba aziphathe ngokwahlukileyo ngokupheleleyo kunangoku.
Oku kunokubonakala ngathi kugqithisile. Emva kwayo yonke loo nto, iqhosha le-SHIFT libonakala lenza okufanayo ngokuqala. Kodwa SHIFT itshintsha nje oonobumba ukusuka kwelinye icala ukuya kwelisezantsi. U "A" ngokufanayo uyafana no "a." Ngapha koko, oomatshini bokuchwetheza abadala ngokwenene babenazo zombini iikopi zoonobumba. Isitshixo se- "ALT" sithatha umatshini wakho usiya kwihlabathi elitsha.
I-ALT + iTAB enye
Kungabonakala ngathi akukho nto yenzekayo xa ubetha i-ALT. Cinezela kwaye ukhulule isitshixo amatyeli aliqela kwaye umatshini weWindows okanye iMac akazukuphendula. Kodwa ukuba ubambe iqhosha le-ALT ezantsi uze ufikelele ngaphesheya kwaye ucofe iqhosha le-TAB kube kanye ngomzuzwana nje kwaye ukhulule isitshixo se-TAB, uya kubona iwindow ivela. Iya kudwelisa zonke izicelo ezisebenzayo, kwaye uya kufumanisa ukuba enye elandelayo kuluhlu ibonisiwe. Xa ukhupha i-ALT, uya kutshintshela kwangoko kule nkqubo.
Amandla e-ALT + TAB kuphela anokwenza uphuculo olukhulu kwimveliso. Awudingi ukuba ususe izandla zakho kwikhibhodi kwaye ushukumise imouse ukuba ufuna ukutshintsha phakathi kwezicelo ezivulekileyo. Yiya uzame ngoku. Chitha imizuzu embalwa usazi ukuba i-ALT + TAB ivakalelwa njani.
Ukuba uhlawula ingqalelo kwi-ALT + TAB enye, uyakuqonda ukuba iyatshintsha phakathi kwe yangoku application kunye igqityiwe ukusetyenziswa isicelo. Oko kuthetha ukuba ukuba utshintsha uye kuthi, isikhangeli sakho sewebhu siye kwiprosesa yamagama nge-ALT + TAB, ungatshintsha umva kunye ne-ALT + TAB. Konke oku kutshintshela ngapha nangapha kunokuvakala njengokuchitha ixesha, kodwa kunjalo kanye into esiyenzayo xa sisenza uphando kunye nokubhala. I-ALT + TAB ilungile kuyo yonke imihla ukuhamba komsebenzi.
Ukugcina imizuzwana embalwa ususa isandla sakho ngapha nangapha kwimouse mhlawumbi akubonakali ngathi kuninzi. Phindaphinda la maxesha amakhulu okutshintsha iyure nganye. Cinga ukuba ulahle okwethutyana kugxilwe xa kufuneka ufumane imouse ngombono wakho wendlela kunye nokutsala isikhombisi phantsi ezantsi kwesikrini nasemva. Ukulawula i-ALT + TAB enye kuya kuyitshintsha ngokuphawulekayo imveliso yakho.
Kukho okungaphezulu kakhulu kuneziseko. Ukuba ubetha i-ALT + TAB kodwa ubambe iqhosha le-ALT, uza kubona zonke ii-icon zezicelo ezisebenzayo. Ungasebenzisa oomatshini bokushicilela abaphindaphindwayo beqhosha le-TAB ukubuyela umva kwiinkqubo obuzisebenzisa kudala. Indibaniselwano ye-SHIFT + TAB iya kwicala elahlukileyo.
Ukuba ukhe wazibamba ukopa idatha ukusuka kwenye inkqubo ukuya kwenye ngezitshixo, ALT + TAB inokwenza amava akho abe kukusebenzisa kuphela ikhibhodi. Oku kungakhokelela kuphuculo olukhulu kwimveliso.
Thatha ixesha lokufunda i-ALT + TAB. Uya kukhawuleza ngomatshini kwaye ukwazi ukwenza umsebenzi omninzi owenziweyo. Kodwa okubaluleke ngakumbi, qaphela ukuba amaqhosha afana ne-ALT ayinyani ukutshintsha imo yeenkqubo ezisingqongileyo. I-ALT ifana nomehluko phakathi kokusebenza kwidesika yakho kunye nokuthetha kwifowuni. Imalunga nokutshintshela kwimeko eyahlukileyo.
Ukutshintsha komxholo lelona xabiso likhulu kwimveliso. Lonke uphazamiseko lubonisa ithuba lokulibala into obuyenza. Chaza into oyenzayo efuna ukuba utshintshe ujoliso lwakho, nokuba luvela kwikhibhodi ukuya kwimouse. Uya kufumana ukuhamba komsebenzi kuhamba ngokugudileyo kwaye uya kufumana okungakumbi.
tags: I-alt tagumatshini wokubhala
Mar 25, 2010 ngo 4:32 PM
Umntu osebenza naye wandibiza ngokuba 'sisiqhwala semouse' kuba bendihlala ndisebenzisa umzobo womsebenzisi ukuhambisa. Kuthathe iminyaka embalwa ngaphambi kokuba ndibone ukuba zisebenza njani iindlela ezimfutshane. Into ebangela umdla kukuba, ndiyakholelwa ukuba abasebenzisi beMac bahlala 'bevuzwa' ngamaqhosha esiko enza izinto ezintle. IiWindows zibanjiwe- kodwa uninzi lwabahlobo bam kwiiMacs ziyamangalisa ngokwazi zonke iindlela ezimfutshane… kwaye imveliso yabo iyayibonisa!
Nov 16, 2012 kwi-6: 03 AM
Inqaku elihle endilaziyo ukuba ndingumsebenzisi we-pc ongenalwazi